डा. बीसीका अनुसार सबैभन्दा बढी ७ सय ४० नमूनामा पोजेटिभ देखिएको दिन शुक्रवार सबैभन्दा बढी उच्च संक्रमण दर १६.४ प्रतिशत देखिएको थियो । ‘यो फल्स पोजिटिभ नतिजा आएर देखिएको हो ।’ उनका अनुसार सरकारले यो विषयमा व्यापक खोजबिन गर्नु आवश्यक छ । इपिडिमियोलजीका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले प्रत्येक प्रयोगशालाको प्रमाणीकरण आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रयोगशालाहरूको नियमन राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।